I-Raw SR9009 powder (i-1379686-30-2) Abavelisi nabaxhasi-Umatshini
SKU: 1379686-30-2 Udidi: Sarm Series
I-Rax SR9009 powder (1379686-30-2) ividiyo
I-Rax SR9009 powder (1379686-30-2) inkcazelo
I-SR-9009 ngu-REV-ERB agonist. I-SR-9011 ibonisiwe ukuba ibulawe ngokuthe ngqo kumaseli omhlaza kunye neeseli ezinomsoco ezincinci, ezibandakanya i-naevi ye-melanocytic, kwaye ayinayo impembelelo ekusebenzeni kweeseli eziqhelekileyo okanye izicubu.
Kwaboniswa ukunyamezela ukunyamezela, ukunciphisa ukuxhalabisa, nokunciphisa i-cholesterol, ubunzima, nokuvuvukala kwiigundane. Ezi mpawu, ukuba zibonakaliswe kubantu, ziza kuphinda ziphendule ezinye zeziphumo zentsebenzo ekusebenziseni kwimimzimba yethu kwaye ngaloo ndlela, ukuphucula impilo yethu. Imiphumo emibi ye-SR9009 yefowuni ayisaziwa. Funda ukuze ufunde kabanzi malunga ne powder SR9009.
I-Rax SR9009 emfutshane (1379686-30-2) Suqobo
Igama lemveliso I-Rax SRXUMUMX
Igama leKhemikhali 1-Pyrrolidinecarboxylic acid, 3 - ((((4-chlorophenyl) methyl) ((5-nitro-2-thienyl) methyl) amino) methyl) -, i-ethyl ester
Inani leCAS 1379686-30-2
I molecular Fi-ormula C20H24ClN3O4S
I molecular WSibhozo 437.939 g / mol
IMasaisotopic Mass 437.118 g / mol
umbala I powder emhlophe
Umzimba Ubuncwane bamanzi: 0.00162 mg / mL
I-Rax SRXUMUMX Aukuguquka ukunyamezela ukunyamezela, ukunciphisa uxhala, nokunciphisa i-cholesterol, ubunzima, nokuvuvukala kwiigundane.
I-Raw Raw Raw SRXUMUMX (1379686-30-2) Inkcazo
Ikhampani ye-SR9009 ayilona yintsapho ye-SARM. Yinto ebalulekileyo umdla, vumela ukuba ndichaze.
Umzimba womntu usebenza ngokuhambelana nesiqulatho se-circumcadian. Oku konke kwenzeka kwiwindow yeeyure le-24. Into ebangel 'umdla kukuba indlela yokukhangela ixanduva lokugcina isigqi se-circadian. Oku kulawula indlela izakhi zofuzo ezivuliwe kwaye zivaliwe.
Ngokomzekelo, xa i-CLOCK kunye ne-BMAL1 izakhi zitshintshiweyo, zenze i-PER ne-CRY ngokuzenzekelayo. I-PER kunye ne-CRY, kwakhona, cima MBAL1 kunye neKHOCK ukusetha kwakhona umjikelezo weeyure ze-2.
I-BMAL1 ikhutshwe yiqela leeprotheni ezaziwa njenge-REV-ERBs. Banoxanduva lokulinganisa iwashi yangaphakathi lomzimba. Ezi zi-REV-ERB zikhutshwa yiqela le-heme elenziwe ngamacandelo amancinci anesinyithi.Izi zifumaneka kuwo wonke umzimba. Ziza ngeendlela ezahlukeneyo kuquka iiseli zegazi ezibomvu.
I-SR9009 powder iyaziwa ngokukwazi kwayo ukuphucula umsebenzi we-REV-ERB kwaye ibe nokuhlaziywa ngokufanelekileyo.
I-Rax SR9009 powder (1379686-30-2) Indlela yokusebenza
Ngenxa yokukwazi ukuphazamisa i-REV-ERBA (NR1D1, NR1D2) emzimbeni, i-SR9009 powder ibonisa izibonelelo ezininzi zezempilo. Ngokusekelwe kuphando olwenziwa kwiimicebe, i-REV-ERB ithonya umsebenzi we-circumcadian isigqi ngokudityaniswa kwe-BMAL1 ukuguqula iipatheni zokulala kunye nomsebenzi wonke.
Ukongeza, i-REV-ERB nayo iboniswe ukuba ithintele eminye imiba yemveliso yamandla.
Oku mhlawumbi kuba i-REV-ERB ivela esibindi, izihlunu kunye nezicubu ezinamafutha:
Ibindi: Kwimizimba ye-900 elawulwa ngumdlalo we-mouse, malunga ne-90% inokuchaphazeleka yi-REV-ERB. Xa sele iqala ukusebenza, le nxalenye icwangcisa izakhi zeglucose zokuvelisa i-glucose ngelixa zishiya i-insulin. Ngexesha elifanayo, kunciphisa impendulo yokuvuvukala komzimba ngelixa kusebenze ukudala kwamaseli amatsha.
Imisipha: I-REV-ERB ivuselela ngokuzenzekelayo imisebenzi ye-mitochondria ngelixa linye linciphisa umonakalo we-mitochondria endala. Le nkqubo iqhuba ngokukhawuleza ukutsha kweoli.
Iifatesi Zamafutha: I-REV-ERB ingaphinda icime i-geni-goring stocks, eye iyanciphisa umveliso we-triglycerides.
Izifundo zezilwanyana kunye nezeseli ezenziwe kwi-SR9009 zibonisa ukuba:
▪ Yandisa ukwanda kwe-oxygen
▪ Iyanciphisa ukuveliswa kweeseli ezintsha ezinamafutha esibindi
▪ I-acid ye-acid kunye ne-cholesterol yemveliso yancitshiswa kakhulu
▪ Kukho inani elikhulu le-mitochondria kwiimisipha
▪ Iimisipha zisebenzisa izinga eliphezulu le-glucose kunye nama-acid acids
▪ Kunamanqatha amaninzi agcinwe kwiimisipha
benefits I-Rax SR9009 powder (1379686-30-2)
◆ Iyanciphisa i-Cholesterol yegazi
◆ Ukwandisa ukunyamezela
◆ Unciphisa ukuvutha
◆ Ukhusela kwiintliziyo zengqondo
◆ Unika Amandla
◆ Unceda ngokuxhalabisa
◆ Unciphisa i-Tissue Damage (Fibrosis)
I-powder SR9009 ephakanyisiweyo (1379686-30-2) Isisombululo
Ngokutsho kweeforamu ze-bodybuilding online, abantu bafanele bawuthathe kwii-10 ukuya kwi-40 mg 3 kumaxesha e-4 ngosuku.
Imiphumela I-Rax SR9009 powder (1379686-30-2)
Kukho akukho miphumo ekhoyo eyaziwayo ye-SR9009. Iziphumo zophando zamagundane azibonakali nayiphi na impawu zobunobuthi besibindi, kodwa ezinye ziye zabika iingxaki zokulala. Akuphazamisi kwiimodemoni zendalo zomzimba wakho ukuze kungabi naluphi na uxinzelelo.
Oku kuthetha ukuba awuyi kufuna i-PCT njengeMK677 neKararine.
Izibonelelo zeSARM kwi-Top 10: SR9009 (1379686-30-2)